Ma ku kaydsan files badan music cadaalad-dhawaajiyeen oo aad Mac? Iibsaday heeso badan ee Lugood oo aad rabto inaad iyaga ciyaaro qalab Android aad? Si kastaba ha ahaatee, ka duwan PC Windows, Mac ma ha ma waxaad kortaan telefoonka Android ama kiniin ahaan drive dibadda adag oo isticmaalaya cable USB ah. Tani waxay u adag tahay in laga wareejiyo Mac music inay phone Android ama kiniin. Dareen careysan? Isdeji. Halkan waxaa ku qoran laba Mac in ay Android qalab music kala iibsiga waxtar leh oo aad si fudud u nuqul ka kartaa music ka Mac qalab Android.
Habka 1. Copy Playlists & Music ka Mac si ay Android 1 Click
Habka Music 2. Transfer ka MacBook ay si xor ah Android
Wondershare TunesGo u Mac waa Transfer qalab Mac si ay Android. Waxaa kuu saamaxayaa inaad jiidi oo hoos u files music aad doonayso inaad ka Mac in Android. Haddii aad qabto tan oo songs, playlists in Lugood, waxa aad isticmaali karto si aad u hagaagsan music Lugood in Android 1 click.
1. Easy in ay isticmaalaan, aad u sahlan
2. Bedelka heeso iyo playlists ka Lugood iyo Mac qalab Android
3. Taageerayaan Android 2.1 iyo kor.
4. La jaan qaada ka badan 2,000 oo qalabka Android, incluidng HTC, Samsung, LG, Sony, Motorola, Huawei, ZTE, iyo in ka badan.
Qasaarooyinka: Ma lacag la'aan ah.
Tallaabada 1. Run Wondershare TunesGo u Android (Mac) on Mac.
Tallaabada 2. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin si Mac. Ka dib markii detcted, qalab Android aad la soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 3. aad Mac, heli heeso ama playlists aad rabto. Markaas, jiidi oo iyaga hoos u aad Android. Waxaad samayn kartaa sida Screenshot aad muujinaysaa.
Tallaabada 4. Waxa kale oo music iyo playlists Waxaad ku wareejin karaa Lugood in Android. Just riix nidaameed tab> Sax nidaameed Lugood in Android . Waxaad sidoo kale u hagaagsan karaa maktabadda oo Dhan ama playlists soo xulay.
Transfer File Android waa barnaamij lacag la'aan ah, taas oo bixisa fududahay in folder kaadhka SD Android on Mac ka helaan. Sidaa daraadeed, kuu soo gudbin karaa files music oo dhan uu ka rabo computer Mac ah in aad telefoon ama Android kiniin lacag la'aan ah.
1. Interface ma aha dareen leh.
2. Ma taageeri soo degida Lugood Playlists.
3. Taageeraan oo kaliya qalabka Android socda Android 3.0.
Hoos waxaa ku tutorial ku wareejinta music ka Mac in ay Android:
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Transfer File Android aad Mac.
Tallaabada 2. Isku telefoonka Android ama kiniin si Mac la cable USB ah;
Tallaabada 3. Daahfurka Transfer ee File Android iyo folder card SD Android u muuqataa,
Tallaabada 4. Tag si Finder aad Mac si aad u ogaato sida aad doonayso inaad songs iyo jiididda iyo iyaga hoos u folder music ku saabsan telefoonka Android ama kiniin.
3 Tools in ay ku xidhmaan Android inay Mac Si fudud
Nidaameed wax kasta ka Mac si ay Android
Best 4 Lugood Badeli kara ee Android
Bedelka Lugood Music inay Device Android
Best 3 SyncMate lagu bedelan karo
Lugood Best u Android Software
Bedelka Lugood Music inay Nexus 5
Nidaameed Android la itune waxba ka heli
Android ka Bedelka Music inay Lugood
2 Siyaabaha u hagaagsan Lugood Music inay HTC
Bedelka Lugood Music in Samsung
A Transfer Best File Android Waxaad u
Best 3 iSyncr lagu bedelan karo
Best 4 doubleTwist lagu bedelan karo
Top 6 Manager Android App: Maareeyaha All Apps on Your Device Android Effortlessly
A Guide Full on Sida loo kaabta Android Phone in PC
Xalka ugu fudud ee ay u gudbiyaan Music ka Android inay iPhone
Top 10 Android Apps si ay u gudbiyaan Android Files wirelessly
10 iPhone Music Wareejinta daaqado iyo Mac
2 Methods si ay u gudbiyaan Xogta laga Nexus 4 ilaa Nexus 5
> Resource > Transfer > 2 Methods si ay u gudbiyaan Music ka Mac si ay Android